. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: ချစ်မိခြင်းရဲ့အပြစ်
ရှင်နှောင်း သူ့ကိုစောင့်နေသည်မှာ နာရီဝက်နီးပါးရှိနေပြီ ..
အခုဆိုရင် သူနဲ့ချစ်သူသက်တမ်း ၆ လ .. ချစ်သူတွေမဖြစ်ခင်ကတည်းက ချိန်းလိုက်တိုင်း အမြဲနောက်ကျတတ်တဲ့ သူ့ကြောင့် နှောင်းက အမြဲတမ်းစောင့်မျှော်သူတစ်ယောက် .. ဘယ်အချိန်ထိ ဆက်ပြီးစောင့်မျှော်ရမယ်ဆိုတာလည်းမသေချာခဲ့ဘူးလေ ..
သူနဲ့ နှောင်း ခင်ပြီး ၁လမှာ သူနှောင်းကို ချစ်ကြောင်းပြောခဲ့တယ် .. နှောင်းလဲ သူ့ကို ဘယ်ဘ၀က ၀ဋ်ကြွေးကြောင့်လဲမသိ .. မြင်မြင်ချင်းချစ်ခဲ့သည်လေ .. ဒါကြောင့်လဲ အချိန်မဆွဲခဲ့ပဲ တစ်ပတ်လောက်စဉ်းစားပြီး ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ် ..
သူ့စရိုက်က ဘယ်အရာကိုမှအလေးအနက်မထားတတ် .. အရာရာကို ပေါ့ပေါ့တွေးတတ်သူ .. နဲနဲမှသည်းမခံတတ်သူ .. သ၀န်တိုတတ်လွန်းသူ .. စိတ်တို ဒေါသထွက်လွယ်သူ .. လူတစ်ဖက်သားခံစားချက်ကို မငဲ့ကွက်တတ်ဘဲ သူ့ခံစားချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ စွပ်စွဲ ပြောဆိုတတ်သူ .. ကဲ .. ဘာများကောင်းကွက်ရှိသလဲနော် ..
နှောင်း သူ့စရိုက်ကို သိသိနှင့် သူ့ကိုချစ်ခဲ့သည် .. သူကလည်း နှောင်းကို ချစ်ခဲ့ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် သူ့ကိုယ်သူထက် ပိုမချစ်ခဲ့ .. သူ့အတ္တထက်ပိုမချစ်ခဲ့ ..
သူ့တွင် နှောင်းထက် အရေးကြီးသောကိစ္စများစွာရှိခဲ့သည် .. ယခုလည်း ရှိနေဆဲ .. ဥပမာ - သူငယ်ချင်း ကိစ္စ၊ ဂိမ်းဆော့တာ၊ ဘိလိယက်ထိုးတာ စသည်ဖြင့်ပေါ့ ..
အခုလည်း သူဘာအကြောင်းကြောင့် နောက်ကျနေသည်မသိ .. ချိန်းထားတဲ့ ခုံတန်းလေးမှာ နှောင်းတစ်ယောက်တည်း ထိုင်နေရင်း ၀မ်းနည်းလာသည် .. မျက်ရည်များ အလိုလို ပါးပြင်ပေါ်သို့စီးကျလာသည် .. သူ့ကြောင်း နှောင်း မျက်ရည်ကျရတဲ့ အခေါင်းပေါင်း မနည်းတော့ ..အခေါက်ခေါက် အခါခါ သူနှောင်းအပေါ် ၀မ်းနည်းအောင်လုပ်ခဲ့လည်း တစ်ယောက်တည်းသာ ကြိတ် မျက်ရည်ကျခဲ့ရသည် .. သူသည် မျက်ရည်များကို မုန်းသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ သူငြိုငြင်အောင် နှောင်း မလုပ်ဝံ့ ..
နှောင်း သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြောက်ရွံ့စိတ်များလွန်းသည် .. သူနဲ့ ဝေးမှာကြောက်သည် .. သူငြိုငြင်မှာကြောက်သည် .. သူစိတ်ဆိုးမှာကြောက်သည် .. သူမချစ်တော့မှာကြောက်သည် .. နှောင်းပေးသလောက် သူပြန်မပေးနိုင်ရင်တောင် သူ့အနားရှိနေရုံနဲ့ နှောင်းရောင့်ရဲနေမှာပါ ..
မိုးဖွားလေးတွေကျလာတော့ နှောင်းအတွေးစတွေပြတ်သွားသည် .. နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ ချိန်းထားတဲ့အချိန်ထက် ၄၅ မိနစ် နောက်ကျနေပြီ ..
နှောင်း သက်ပြင်းမောတစ်ခု မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ် .. ထိုင်နေရာမှထရပ်လိုက်ပြီး ကားဆီသို့ ထွက်လာခဲ့လိုက်သည် .. ဒီလောက်နောက်ကျနေတဲ့အပြင် မိုးပါရွာပြီဆိုရင်တော့ သူမလာတော့မှာ သေချာပြီလေ .. ကားပေါ်ရောက်တော့ ဖုန်းမြည်လာတယ် .. နှောင်းသိပြီးသား အလွတ်ရပြီးသားစကားတွေ ထပ်ပြောလိမ့်ဦးမယ် ..
"နှောင်းလား .. မောင်ပါ .. မောင်အိပ်ရာထ နောက်ကျသွားတယ် .. နှောင်းအခုဘယ်မှာလဲ .. ပြန်နေပြီလား .. ဆောရီးနော် နှောင်း .."
"အာာ နှောင်းကလဲ တအင်းအင်းပဲပြောနေတာပဲ .. ဘာဖြစ်နေတာလဲ .. မင်းကလဲ .."
"ဘာမှမဖြစ်ဘူး .. ဒါပဲမလား .."
"ဘာမှမဖြစ်ရင်လည်း စကားလေးဘာလေး ပြောဦးလေ .. ဘာမှလည်းမပြောဘူး .."
"ပြောပါတယ် .. ပြန်တော့မယ်လေ .. ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်နော် .."
"အင်း .. မောင့်ကိုချစ်လား ပြောသွားဦးလေ .."
"အင်း .. ချစ်ပါတယ် .. ဒါပဲနော် .."
"အိုခေ အိုခေ .. မောင်လည်း အရမ်းချစ်တယ် .. ဒါဆို ကားကောင်းကောင်းမောင်းနော် .."
နှောင်း ဒီနေ့အတွက် ဒုတိယမြောက် သက်ပြင်းမောတစ်ခုကို မှုတ်ထုတ်လိုက်သည် .. သူ ဘယ်ချိန်ထိ ဒီလိုလုပ်နေဦးမှာလဲ .. သူ နှောင်းကို တကယ်ရော ချစ်ရဲ့လား .. နှောင်း နောင်တရချင်သွားသည် .. ဘာလို့ သူ့လိုလူမျိုးကိုမှ ချစ်မိသလဲဆိုပြီးလည်း ငုတ်လျှိုးနေတဲ့ မာနလေး ခေါင်းပြူလာသည် .. နှောင်း သူကြောင့် အခု အရမ်းစိတ်ရှုပ်နေတယ် .. အရင်ကလည်း ရှုပ်ခဲ့ရပြီးပြီ .. နောက်လည်း .. နှောင်းခေါင်းကို ခါယမ်းလိုက်သည် .. မတွေးချင်ဘူး .. ဒီလိုအတွေးတွေ မတွေးချင်ဘူး ..
နှောင်း ဟိုတွေးဒီတွေးနှင့် မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားသည် .. ရုတ်တရက် ဖုန်းမြည်လာသည် ..
"ဘာလို့ဖုန်းမဆက်တာလဲ .. ခုပြန်ဆက်ကွာ .." ဒေါသတကြီးဖုန်းချသွားသည် .. နှောင်း သူ့ဖုန်းနံပါတ်ကို ပြန်နှိပ်လိုက်သည် ..
"အင်း ပြောလေ .. ဘာပြောမလို့လဲ .."
"အိပ်နေပြီလား .. အစောကြီးရှိသေးတယ် .."
"အင်း အိပ်နေပြီ .."
"ဟုတ်လား .. မောင်တောင် ခုနကမှပြန်ရောက်တာ .. နှောင်းကိုသတိရလို့ ဖုန်းဆက်လိုက်တာ .. နှောင်းရော မောင့်ကို သတိမရဘူးလား .."
သူသည် ထိုကဲ့သို့ ကိစ္စအားလုံးနောက်မှာ နှောင်းကိုထားထားသည်လေ .. နှောင်းပြုံးလိုက်သည် ..
"သတိရပါတယ် .." မဖြေချင်ဖြေချင်ဖြေလိုက်သည် ..
"ဘာဖြစ်နေတာလဲ .. စကားလည်းကောင်းကောင်းမပြောဘူး .. ဘာလဲမပြောချင်ဘူးလား .. မင်းဘာဖြစ်နေတာလဲ .."
နှောင်းသိနေသည် .. ဒီလိုဖြေရင် ပြသနာတက်တော့မယ်ဆိုတာနှောင်းသိသည် .. ဒါပေမယ့် နှောင်း စိတ်မပါ .. စိတ်တွေရှုပ်နေတယ် .. အရမ်းမွမ်းကြပ်နေသည် .. နှောင်း ပေါက်ကွဲချင်နေသည် .. ပေါက်ကွဲသွားခဲ့လျှင် သူနဲ့ နှောင်း ...................
"မဖြစ်ပါဘူး .. အိပ်ချင်နေလို့ပါ .. ခုမှပြန်ရောက်တာလား .. ထမင်းရောစားပြီးပြီလား .." နှောင်း စိတ်ကိုလျှော့ပြီး ဆက်တိုက်ပြောလိုက်သည် .. နှောင်း အတတ်နိုင်ဆုံး သူ့လက်ကို ဆွဲကိုင်ထားချင်သေးသည် ..
ဒီလိုနဲ့ နှောင်းတို့ ချစ်သူသက်တမ်း ၁ နှစ်ထဲဝင်လာပြီ .. နှောင်းသူ့ကို ရင်နာနာနဲ့ ဆက်ချစ်နေဆဲပဲ .. နောင်တတွေနဲ့ ချစ်နေဆဲပဲလေ .. ဒါနှောင်းရဲ့ ၀ဋ်ကြွေးပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် .. သူဘယ်လောက်ရင်နာအောင်လုပ်လုပ် နှောင်းစိတ်က သူ့ဆီမှာပင် ..
တစ်ရက် .. သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အိမ်ကိုရောက်လာပြီး ..
"မိနှောင်း .. ငါနင့်ကိုပြောစရာရှိလို့ .. နင့် ရည်းစားမှာ နင့်အပြင် နောက်တစ်ယောက်ရှိနေတယ်နော် .. နင်ကြည့်လုပ်ဦး ..@#$%^&*@#$%^&*"
သူငယ်ချင်းလာပြောသွားလိုက်တာ အစုံ .. နှောင်း ခေါင်းတွေမူးလာသည် ..
နှောင်းစုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့ ဟုတ်သည်တဲ့ .. သူ့ပါးစပ်က၀န်ခံရန်သာ ကျန်တော့သည် .. နှောင်း ဘာလုပ်သင့်သလဲ .. သေချာတာတော့ နှောင်း သူ့ကို သိပ်ချစ်သည် .. တွေးလေ နှောင်း ရင်တွေနာလာလေလေ .. နှောင်း သူ့ကို မေးသင့်သလား .. သူ ၀န်ခံလိုက်လျှင် .. ဟူးးးးးးး .......
မေမေတို့ သိတော့ လုံးဝသဘောမတူနိုင်ပါတဲ့ .. နှောင်းကိုလည်း နောက်ဆုတ်ဖို့ ဖြောင်းဖျကြသည် .. နှောင်း ရူးချင်လာပြီ ..
ဒီရက်ပိုင်း နှောင်း အိပ်မရတဲ့ညတွေ ရက်ဆက်ဖြစ်လာသလို လူကလည်း အားနည်းလာသည် .. မေမေက အစ်မတွေရှိတဲ့ တခြားနိုင်ငံလိုက်သွားရမည်တဲ့ .. နှောင်းသူ့ကိုတွေ့ချင်သေးသည် ..
နှောင်းဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်သည် .. သူနဲ့သွားတွေ့မည် .. တွေ့ပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးမည် .. သူသာ နှောင်းကို တကယ်ချစ်ခဲ့ရင် ဘာကိုပဲရင်ဆိုင်ရ ရင်ဆိုင်ရ နှောင်းရင်ဆိုင်မည် .. အားလုံးကို ဆန့်ကျင်ဖို့လည်း နှောင်း ၀န်မလေး .. သူမချစ်ခဲ့ဘူးဆိုလျှင်တော့ နှောင်း အတွက် ရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိတော့ မေမေတို့ ရွေးချယ်ပေးတဲ့ လမ်းကိုသာလျှောက်ရုံ ..
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အကူအညီနဲ့ နှောင်း အိမ်ကထွက်ခွင့်ရခဲ့တယ် ..
သူနဲ့တွေ့ဖို့ သူ့အိမ်ကိုပဲတန်းသွားလိုက်တယ် .. အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ အိမ်တံခါးစေ့ထားတာနဲ့ သူဝင်လာလိုက်တယ် .. ဧည့်ခန်းထဲရောက်တော့ သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက် .. နှောင်း ကိုယ့်အမြင်တောင် ကိုယ်မယုံနိုင်ဘူး .. ခေါင်းထဲမိုက်ကခဲဖြစ်သွားတယ် .. ဘေးကိုလှမ်းထောက်လိုက်တော့ ရှိုးကေ့စ်ပေါ်တင်ထားတဲ့ ပန်းအိုးလေး ပြုတ်ကျသွားတယ် .. သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်း လှည့်ကြည့်တယ် .. နှောင်း အားနာပြုံးလေးပြုံးပြပြီး ..
"အားနာလိုက်တာ .. ကျွန်မ အခန်းမှားသွားတယ် .." သူမတရှိန်ထိုးပြေးထွက်လာခဲ့တယ် .. သူနောက်ကနေ အော်ခေါ်နေတဲ့အသံတော့ ကြားတယ် .. နှောင်း လှည့်မကြည့်မိဘူး .. သူ့ရဲ့ ချုပ်နှောင်မှုတွေကြားထဲက ခုဆိုရင်တော့ လွတ်မြောက်သင့်ပြီ လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားသင့်ပြီလေ .. ကိုယ့်အခြေအနေကိုယ်လည်း နားလည်သင့်ပြီမဟုတ်လား .. နှောင်း ဒေါသ ရှက်စိတ် တွေ ရောထွေးပြီး ပြေးထွက်လာခဲ့တယ် .. ကားပေါ်ရောက်တော့ ကားကို စက်ကုန်ဖွင့်ပြီး မောင်းခဲ့တယ် ..
"ငါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူး .. ဘာလို့ဒီလောက်တုံးတဲ့လုပ်ရပ်လုပ်မိပါလိမ့် ..နင်မရှက်ဘူးလား .. ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို စုံလုံးကန်းပြီး ချစ်နေတာ သင်ထားတဲ့ပညာတွေ မိဘကပေးထားတဲ့ အသိဥာဏ်တွေ ဘယ်ရောက်ကုန်လဲ .."
အပြင်ဘက်မှာလည်း မိုးတွေသည်းကြီးမည်းကြီး .. ကားထဲက မိန်းကလေးကလည်း မျက်ရည်တွေလည်း တားမနိုင်ဆီးမရကျလို့ .. ဖုန်းကမြည်လာတယ် .. အဆက်မပြတ် .. သူမ မျက်ရည်တွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းသုတ်ပစ်လိုက်တယ် ..
"မတန်ဘူး .. နင်မျက်ရည်မကျနဲ့ .." ဖုန်းကိုကိုင်ပြီး ဘတ်ထရီကို ဖြုတ်လိုက်တယ် .. ကားရှေ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ ကားတစ်စီး အရှိန်ပြင်းပြင်း ...
ဟင် .. သူငိုနေပါလား .. မျက်ရည်တွေကိုမုန်းပါတယ်ဆိုတဲ့ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကျတဲ့မျက်ရည်ကို နှောင်း မြင်ဘူးသွားပြီ .. နှောင်းကို မျက်ရည်တွေနဲ့ ချုပ်နှောင်နေချင်သေးတာလား .. နှောင်း ကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးသင့်ပါပြီ .. နှောင်းကို သွားခွင့်ပြုပါတော့ ..
ရေးသားသူ moekhar at 12/25/2008 01:45:00 AM